Madaxweynaha Puntland oo sheegay in Itoobiya ay iska kaashanayaan dagaalka Al-Shabaab – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Puntland oo sheegay in Itoobiya ay iska kaashanayaan dagaalka Al-Shabaab
Madaxweynaha Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas oo ku sugan magaalada Addis Ababa ayaa la kulmay Taliyaha Ciidamada Milateriga Itoobiya iyo Madaxa Sirdoonka, isagoo kala hadlay sidii dowladda Itoobiya ay taageero u siin laheyd Ciidamada Puntland ee dagaalka kula jira Al-Shabaab.
C/wali Gaas oo wareysi siiyay laanta Afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa sheegay in dowladda Itoobiya ay ka wada hadleen sidii ay isaga kaashan lahayeen dagaalka Al-Shabaab.
“Dhibta Puntland soo gaarta, Itoobiyana waa soo gaareysa, waxaa ka wada hadalnay inaan iska kaashano dagaalka Al-Shabaab, hal cadaw ayaa leenahay, waxaa fileynaa in aysan hagran doonin awoodooda oo ay na taageeraan”Madaxweynaha Puntland.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Madaxweynaha Puntland uu weydiistay Itoobiya Ciidamo kala qeyb gala dagaalka ka socda deegaano ka tirsan Nugaal iyo Bari, halkaasoo ah goobo buuraley ah, isla markaana Ciidamada Puntland muddo afar maalmood dagaal kula jiraan Al-Shabaabki soo gaaray xeebaha Puntland.
Madaxweynaha Puntland C/wali Gaas ayaa lagu wadaa inuu dib ugu laabto magaalada Garowe, si uu u sii xoojiyo gulufka Puntland uga hortageyso fiditaanka Al-Shabaab ee deegaanada xeebaha ah.
Dagaaladii labadii maalmood ee u dambeeyay ka dhacayay Togga Suuh iyo aagga Godob-Jiiran ayaa la sheegay inuu ka dhashay khasaarooyin kala duwan oo labada dhinac kala gaaray, inkastoo Puntland ay sheegatay in dagaalyahano badan ka dileen Al-Shabaab.
Wasiirka Warfaafinta Puntland oo sheegay inay kasaareen toga suuj xoogagii al-shabaab